Ọktoba 2020: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke Software efu | Site na Linux
Taa Fraide 30 site na October 2020, nanị otu ụbọchị site na njedebe nke ọnwa a, nke wetaara anyị dị ka ọ dị na mbụ Blog Site Linux ọtụtụ ozi oma, nkuzi, ntuziaka, ntuziaka site na ubi nke Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux, anyị ga-eme a nta nyochaa taa na ụfọdụ pụtara ìhè posts.
Este Nchịkọta ọnwa, dị ka ọtụtụ n'ime unu maraworị, nzube ya bụ iji nye a bara uru obere ájá maka ndị niile na - agụ akwụkwọ anyị, ọkachasị ndị na - ejighi aka ha hụ, gụọ ma kesaa ya n’oge.
1 Nchịkọta October 2020
1.2.1 October 2020 Mgbasa Ozi
Nchịkọta October 2020
Mozilla eweputala ụdị ọhụrụ nke Thunderbird, onye a ma ama na-ezitere akwukwo ozi ruru gi mbipute 78.3.1. Dị ka anyị maara nke ọma, Thunderbird bụ otu n'ime ndị ahịa email kachasị mma, yana ịnwere onwe ma na-emeziwanye ọhụụ ọ bụla.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Mozilla Thunderbird 78.3.1
Launchlọ ngosi ọhụrụ nke ikpo okwu ka gosipụtara ugbu a Ogige 20 na-esote, mbipute nke mmezi mmezi na nyiwe dị iche iche (Slack, MS Online Office Server, SharePoint, MS Teams, Jira, na ndị ọzọ), na mgbakwunye na nke ụfọdụ mmelite njikarịcha na ndị ọzọ gosipụtara.
Nextcloud Hub 20 biara na ndozi mmekorita, njikarịcha na ihe ndị ọzọ
Ugbu a, anyị nwere ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ Ihe omume Linuxero online akpọ 24H24L, nke isi ebumnuche ya bụ ịkọwa ma kwalite, n'ụzọ ezi obi na obi ụtọ, banyere arụmọrụ nke GNU / Linux n'ọtụtụ ebe.
Priselọ ọrụDB, a Massachusetts nkeonwe ụlọ ọrụ na-enye free na-emeghe isi PostgreSQL dabeere na nchekwa data dabeere na software na ọrụ, enwetara Ugboro abụọ, Ngwá ọrụ Postgres zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ ngwọta. Nke a ọ nwere ike ịbawanye nsogbu na obodo PostgreSQL?
Ndị injinia nke Google mere ka a mara site n'akwụkwọ nke ha achọpụtala a nsogbu dị ike (CVE-2020-12351) ke ikpo nke Bluetooth "BlueZ" nke a na-eji na nkesa Linux na Chrome OS.
BleedingTooth: a vulnerability na BlueZ nke na-enye ohere igbu koodu koodu
The OpenPrinting oru ngo (na-akwado ya Linux Foundation), mara ọkwa na ndị mmepe ya amalitela ndụdụ nke CUPS ebi akwụkwọ usoro, ebe akụkụ kachasị arụ ọrụ na mmepe bụ Michael R Sweet, onye edemede mbụ nke CUPS.
OpenPrinting na-arụ ọrụ na ndụdụ nke usoro ibipụta CUPS
NoGAFAM bụ saịtị na - abụghị naanị na - akwalite sọftụwia efu, kamakwa na - akpali ndị ọzọ ịmara uru data sitere na ịntanetị, yana ihe egwu ha na - agba mgbe ha na - eji nyiwe, ngwa na ọrụ nke ọtụtụ ndị Teknụzụ Teknụzụ zuru ụwa ọnụ, nke ọtụtụ n'ime ha maara dika GAFAM.
NoGAFAM: Weebụsaịtị na-atọ ụtọ na ngagharị maka sọftụwia efu
Wallabag bụ ngwa anyị nwere ike iwunye na a nwee ma ọ bụ ihe nkesa onye ọzọ, nke ahụ na-enyekwa anyị ọrụ yiri ngwa ndị ahụ e kwuru na mbụ, n'ụzọ ga-eme ka onye nchịkwa ya jikwaa ijide ederede nke ibe weebụ achọrọ, maka ịgụ akwụkwọ mgbe e mesịrị, n'ụzọ ahaziri na nke nụchara anụcha.
Abia na webusaiti igu ma mara akuko banyere Software (Operating Systems, Application and Platform) o dighi nma karie Blọọgụ, na mgbe ọ na-abịa Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / LinuxỌfọn, ọbụna karịa. Abia na ime atụnyere ma ọ bụ chọọ ụzọ ọzọ e nwere ọtụtụ ndị ọzọ bara uru, dị ka ndị ahụ a kpọtụrụ aha n’akwụkwọ a.
Nhọrọ ndị ọzọ: Ebe kachasị mma iji tulee Software na Open Software
Streamlit ringkekọrịta ọrụ igwe ojii maka ịkesa ngwa ngwa AI
OpenShot: Odi ohuru ubochi obula nke 2.5.1 nke ugbua
Tor Browser 10: Ntughari ohuru weputara na ndozi di nma
Ihe Shell: Ngosipụta desktọpụ nke oge a n'elu GNOME Shell
October 2020 Mgbasa Ozi
Ugboro abụọ Linux 4.13: 2020-10-05
Nbudata Linux 7.9: 2020-10-08
Ogidi Kiosk 5.1.0: 2020-10-12
Ime Anwansi 2020_10_12: 2020-10-12
Ahapu NG Firewall 16.0.1: 2020-10-14
Nzọpụta 2.0: 2020-10-15
Redo Nnapụta 3.0.0: 2020-10-16
mgbochiX 19.3: 2020-10-17
Mepee OpenBSD 6.8: 2020-10-18
Ọdụ 4.12: 2020-10-20
Sistemụ nnapụta 7.00: 2020-10-20
Ubuntu 20.10, Ubuntu MATE 20.10 na Ubuntu studio 20.10: 2020-10-22
Kubuntu 20.10, Lubuntu 20.10 na Onye isi 20.10: 2020-10-23
Ubuntu Budgie y Ihe ngosi Ubuntu Kylin 20.10: 2020-10-23
Gbanyere ndụ 1.1.0-6: 2020-10-28
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-atụ anya nke a "nchikota bara uru" na isi n'ime na n'èzí blog «DesdeLinux» maka ọnwa nke «octubre» site n’afọ 2020, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke okike, gigantic na eto eto nke ngwa nke na maka «GNU/Linux».
Maka ozi ndị ọzọ, egbula oge ọ bụla ịga leta nke ọ bụla Ọbá akwụkwọ dị n'ịntanetị dị ka OpenLibra y JEDIT ịgụ akwụkwọ (PDF) n'isiokwu a ma ọ bụ ndị ọzọ ihe omuma. Maka ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ nke a «publicación», akwụsịna ịkekọrịta ya ya na ndi ozo, n'ime gi Ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị, ọwa, otu, ma ọ bụ obodo nke netwọk mmekọrịta, ọkacha mma n'efu ma mepee Mastodon, ma ọ bụ nchebe na nzuzo dị ka telegram.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ọktoba 2020: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke sọftụwia efu
Fedora 33 rutere na mmelite na njikwa okpomọkụ, ngwanrọ na mbipụta ofntanetị nke Ihe